‘Majekiseni eCovid anobaiwa nenguva’ | Kwayedza
28 May, 2021 - 18:05 2021-05-28T18:18:46+00:00 2021-05-28T18:18:46+00:00 0 Views
MUTEVEDZERI wegurukota rezveutano nekurerwa kwevana, Dr John Mangwiro, vanoti majekiseni ari kubaiwa vanhu ekudzivirira Covid-19 echipiri (2nd dose) ane nguva yakatarwa kuti abaiwe mushure mekubaiwa kwerekutanga (1st dose) iyo inofanirwa kutevedzerwa nemazvo.
Vakataura mashoko aya mudare reNational Assembly svondo rapera vachipindura mubvunzo wemumiriri weBubi, Cde Sonny Mguni, avo vaida kuziva nguva inofanirwa kunge vanhu vachibaiwa majekiseni echipiri mushure mekubaiwa rekutanga.
“Mubvunzo wangu unoenda kune mutevedzeri webazi rezveutano. Patakatanga chirongwa chekubaiwa kwevanhu majekiseni ekudzivirira Covid-19, jekiseni rechipiri rainzi rinofanirwa kubaiwa mushure memazuva 28 kusvika 30. Ndinoda kuziva kuti mutemo mutsva wave kuti kudii sezvo vanhu vave kubaiwa jekiseni repiri mushure memazuva 14?
“Izvi hazvizogona here kuita kuti pave nekutyira kure uye kukanganisawo hurongwa hwedu hwekupedza chirwere ichi?” vanodaro.
Dr Mangwiro vanoti pane mhando mbiri dzemajekiseni ekudzivirira Covid-19 ari kubaiwa vanhu muZimbabwe anova Sinopharm neSinovac uye akasiyana nguva dzinofanirwa kubaiwa vanhu kechipiri mushure mekubaiwa kekutanga.
“Pane mhando mbiri dzemajekiseni, Sinopharm iyo jekiseni rechipiri rinofanirwa kubaiwa mukati memazuva 28. ReSinovac rinofanirwa kubaiwa mukati memazuva 14.
“Hapana chitsva. Zvinoramba zvakadaro kuti mushonga wemujekiseni mumwe nemumwe une nguva yawo inofanirwa kubaiwa jekiseni repiri,” vanodaro Dr Mangwiro.
Zimbabwe iri kutarisira kutambira mamwe majekiseni 500 000 eSinopharm kubva kuChina munguva pfupi iri kutevera izvo zvichasimudzira zvikuru chirongwa chekubaiwa kwevanhu nhomba dzekudzivirira Covid-19.
Hurumende yakaisa padivi mari inosvika US$10 miriyoni yekutenga mushonga wemajekiseni uyu nechinangwa chekurwisa kupararira kwedenda iri uye majekiseni 1,2 miriyoni eSinovac akatotengwa kare kubva kuChina.
Zimbabwe yakatambira zvakare mamwe majekiseni 400 000 eSinopharm vaccine akapihwa Zimbabwe nehurumende yeChina ne35 000 akabva kuhurumende yeIndia.
Chirongwa chekubaya vanhu majekiseni ekudzivirira Covid-19, icho chakatanga munaKukadzi gore rino, chine chinangwa chekuti vanhu vanosvika 10 miriyoni vabaiwe majekiseni aya nedonzvo rekuti nyika inge yakachengetedzeka kubva kudenda iri (herd immunity).